Maraakiib dagaal oo ka socda Spain iyo France oo yimid xeebaha Soomaaliya si ay uga qaybqaataan la dagaalanka burcadbadeeda - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaraakiib dagaal oo ka socda Spain iyo France oo yimid xeebaha Soomaaliya si ay uga qaybqaataan la dagaalanka burcadbadeeda
March 29, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Maraakiib dagaal oo ka socda Spain iyo France oo yimid xeebaha Soomaaliya si ay uga qaybqaataan la dagaalanka burcadbadeeda. [Photo Credit: EUNAVFOR]
Garoowe-(Puntland Mirror) Intii lagu guda jiray asbuucyadii u dambeeyay maraakiib dagaal oo ka socda wadamo Yurub kuyaala gaar ahaan Spain iyo France ayaa soo gaaray xeebaha Soomaaliya, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Markab lagu magacaabo ESPS Galicia, oo Spain leedahay iyo Markab la dhaho FS Courbet oo France leedahay ayaa yimid biyaha Soomaaliya si ay u sameeyeen howlgalo lagula dagaalamayo burcadbadeeda, sida ay sheegeen howlgalka ciidamada badda ee Midowga Yurub EUNAVFOR ee ku sugan biyaha Soomaaliya.
Maraakiibta oo ay weheliyaan diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa howlgalo ilaalin ah ka geysan doona xeebaha ku dherersan xeebta Soomaaliya.
Dhanka kale, dowladda Puntland ayaa dhawaan deegaanada xeebaha u dirtay cutubyo ciidamo ah oo katirsan ciidanka badda ee PMPF si ay uga hortagaan falalka burcadbadeeda, sida sarkaal katirsan PMPF uu u xaqiijiyay warsidaha Puntland Mirror.
Kadib markii burcadbadeeda Soomaaliya horaantii bishaan Maarso ay afduubteen Markab ganacsi oo saliida qaada oo la dhaho Aris 13, waxaa muuqatay in burcadbadeeda Soomaaliya ay wali awoodaan in ay qaadi karaan weeraro lid ku ah maraakiibta ganacsi ee gooshaysa biyaha Bad-weynta Hindiya iyo Gacanka Cadmeed.
Tirada weeraradii burcadbadeeda Soomaaliya ayaa si weyn hoos ugu dhacday intii lagu guda jiray shantii sanno ee lasoo dhaafay.
Dhawaan, iyaga oo la hadlayay warbaahinta maxaliga ah, qayb kamid ah kalluumaysatada ku sugan xeebaha Puntland ayaa ku goodiyay in ay hubka qaadan doonaan mar labaad ayna ku noqon doonaan burcadbadeednimada si ay u la dagaalamaan waxa ay ugu yeereen “jariifayaasha ajaaniibta ah.”
October 17, 2017 Puntland oo gurmad u diri doonta Muqdisho
September 26, 2017 Khilaaf u dhaxeeya masuuliyiinta maamulka Galmudug oo ka jira magaalada Cadaado
Haayada World Vision oo tababar degmada Dangorayo ugu soo gabagabaysay guddiyo ganacsi iyo guddi kala shaqeeya fududaynta mashruuca ganacsiyada yar-yar
Warships from Spain and France arrived off Somalia to join counter piracy patrols
Guddiga Doorashooyinka Puntland oo magacaabay Xoghaye cusub
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddiga Doorashooyinka Puntland ayaa maanta oo Talaado ah Ubax Cabdullaahi Abshir u magacaabay Xoghayaha Guud ee guddiga, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay guddiga. Xoghayaha cusub ayaa leh in ka badan 15 sanno [...]
Yariisow oo lagu aasay magaalada Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Duqii Muqdisho ayaa maanta oo Axad ah lagu aasay magaalada Muqdisho. Diyaarad siday maydka Cabdirixmaan Cumar Cusmaan ayaa subaxnimadii hore ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Masuuliyiinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya [...]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dowlada Puntland ayaa sheegtay in ciidamada amaanka ay weerar ku qaadeen maleeshiyaad Al-Shabaab ahaa oo ku dhumaalaysanayay deegaanka Jeexdin oo u dhow magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, sida uu sheegay sarkaal dowlada ah. [...]